KUMAHEBHERE 7 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
KUMAHEBHERE 7KUMAHEBHER ... 7
Omnye umbingeleli onjengoMelkizedeki
71UMelkizedekiNdum 110:4 lo ke wayengukumkani waseSalem, engumbingeleli kaThixo uPhezukonke. UAbraham wathi evela edabini apho wayoyise ookumkani, wadibana noMelkizedeki owasuka wamsikelela. 2Ke yena uAbraham wamnika isishumi sawo onke amaxhoba.ZiQalo 14:17-20 Eli gama linguMelkizedeki lithetha “ukumkani wobulungisa”. Kanti ke futhi ukwangukumkani waseSalem, oko kukuthi “ukumkani woxolo”. 3UMelkizedeki lo ke akanayise nanina, namlibo wakuzalwa. Asaziwa isiqalo nesiphelo sobomi bakhe. Ufana noNyana kaThixo: uhlala engumbingeleli nanini-nanini.
4Kucacile ke ukuba mkhulu, kuba nokhokho wethu uAbraham wanikela isishumi samaxhoba kuye. 5Isizukulwana sikaLevi esingababingeleli siyagunyaziswa ngumthetho ukuba sithathe isishumi ebantwini,Ntlango 18:21 oko kukuthi kumawabo, nangona nawo ekwayinzala ka-Abraham. 6UMelkizedeki akayiyo inzala kaLevi, kodwa nakuba kunjalo wathatha isishumi kuAbraham, waza wamsikelela; ngoko ke wasikelela umntu owanikwa izithembiso nguThixo. 7Yinto engenakuphikwa ke ukuba osikelelayo mkhulu kunosikelelwayo. 8Ngokwesiko lababingeleli izishumi zithathwa ngabantu abafayo, kanti ke yena uMelkizedeki uthathe izishumi engongqinelwa *naziziBhalo ukuba ungophilayo. 9Ngoko ke singatsho ukuthi uLevi, nakuba zinikwa yena nje izishumi, kodwa wanikela izishumi ngoAbraham. 10Kuba kaloku wayesesesinqeni sika-Abraham, ukudibana kwabo noMelkizedeki. 11AmaSirayeli ukunikwa kwawo umthetho wawusekelwe ngobubingeleli bakwaLevi. Ke, ukuba ababingeleli babaLevi babegqibelele, ngekungabangakho mfuneko yakuba kuvele mbingeleli wumbi, nokwenza ingumbingeleli wodidi lukaMelkizedeki, ingelulo oluka-Aron. 12Ngoko ke ukuguqulwa kobubingeleli kuveze imfuneko yokuba uguqulwe nomthetho. 13Kaloku uYesu, lo kuthethwa ngaye apha, uphuma kwenye indlu, apho kungekho mntu wakha walungiselela eqongeni lamadini. 14Iyaqondakala into yokuba iNkosi yethu yeyendlu kaJuda, ibe ke uMosis akazange ayikhankanye le ndlu malunga nobubingeleli.
15Ngoku lo mcimbi ucaca ngakumbi, kuba kuvele mbingeleli wumbi ungowodidi lukaMelkizedeki. 16Ububingeleli akabuzuzanga ngokwemigaqo nomthetho wabantu, koko ubufumene ngamandla obomi obungayi kuze bunqanyulwe. 17Kaloku iziBhalo zithi: “Uya kuba ngumbingeleli wodidi lukaMelkizedeki ohlala ehleli.”Ndum 110:4 18Lowa wokuqala umthetho udedisiwe ngenxa yokuba ungenamandla, usoyiswa. 19Umthetho kaMosis ubungakwazi kusulungekisa nto. Ngoku ke kuvezwe ithemba elingcono elisisondezayo kuThixo.
20Ngaphezu koko, ngoku kukho nesifungo sikaThixo; ukanti akuzange kubekho sifungo ukumiselwa kwabanye ababingeleli. 21Kodwa ke kulo mbingeleli unguYesu kwenziwa isifungo, njengoko zisithi iziBhalo:
“Ifungile iNkosi, futhi ayiyi kujika:
‘Ungumbingeleli ngonaphakade.’ ”Ndum 110:4
22Ngoko ke uYesu usisiqinisekiso somnqophiso ongcono.
23Ababingeleli bokuqala bona babemiselwa balandelelane, kuba kaloku babesifa, bengenako ukuhlala behleli emsebenzini wabo. 24Kodwa bona obukaYesu ububingeleli abupheli, kuba yena uhlala ehleli ngonaphakade. 25Esi sisizathu esibangela ukuba abe nako ukubasindisa ngokupheleleyo abo beza ngaye kuThixo, njengoko ehlala ehleli ebathethelela.
26Ngoko ke uYesu ngoyena mbingeleli mkhulu ukwaziyo ukuhlangabezana nemeko yethu. Ungcwele, akanasici, enyulu; futhi wahlukanisiwe naboni, wanyuselwa ezulwini. 27Yena akafani nabanye ababingeleli. Akukho mfuneko yakuba asondeze amadini mihla le, ngenxa yezono zakhe nangenxa yezono zabantu.Nqulo 9:7 Wasondeza idini kwaba kanye qwaba, ukuzinikela kwakhe. 28Umthetho kaMosis wona umisela abantu ababuthathaka ukuba babe ngababingeleli abakhulu. Kodwa sona isithembiso sikaThixo esinesifungo – eso sifike emva komthetho – simisele uNyana ohlala esulungekile nanini nanini.